မိတျကပျမလိမျး အဖကျမပါတဲ့ သူမပုံကို ဝဖေနျတဲ့သူတှကေို ဒဲ့ပွောလိုကျတဲ့ မွတျကသေီအောငျ – Askstyle
“တချို့သော ယောက်ကျားတွေက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲတွေ့ဖူး..အသဲအသန်ကြိုက်ကြပြီး မင်းသမီးယောက်ကျားဖြစ်ချင်တဲ့ အချစ်စစ်မပါတဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်ရုံသက်သက်နဲ့လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းကြုံရတော့ ပကာသနကိုမက်မောတဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေလည်းရှိသားပဲလို့ သိလိုက်ရတယ်.ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်ချစ်လို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ယောက်ျားတွေဆီက (လက်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကလွဲရင်)
ဘာမှမယူသလို ဘာမှမတောင်းဆိုခဲ့ဘူး.ကိုယ်ကပဲ တတ်နိင်သလောက် သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါကူညီပေးခဲ့တာ.(ယူသွားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းချင်ရင် လာငြင်းပါ.ဘာလို့ကူညီခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ငွေ အမောက်ကိုလူသိရှင်ကြားစာရင်းချပြပေးမယ်)တခြားလူတွေကို သွားမငြင်းနဲ့နော်.ကိုယ့်ဆီကို ကိုယ်တိုင်လာငြင်း.အပြင်လူကဘာမှ သိတာမဟုတ်ဘူးလေ ပြောချင်တဲ့လိုရင်းတောင် ပျောက်သွားတယ်..မိတ်ကပ်တွေနဲ့ပုံမြင်ပြီး သိပ်လှနေတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေ သိစေချင်တာက ကိုယ်ဟာ အသက်၄၈ နှစ် သာမန် ရွက်ကြမ်းရေချို မိန်းမတယောက်ထက်မပိုပါဘူး”
“တခြို့သော ယောကျကြားတှကေ ရုပျရှငျထဲမှာပဲတှဖေူ့း..အသဲအသနျကွိုကျကွပွီး မငျးသမီးယောကျကြားဖွဈခငျြတဲ့ အခဈြစဈမပါတဲ့ ပျေါပွူလာဖွဈခငျြရုံသကျသကျနဲ့လာတဲ့စိတျဓာတျအောကျကွတဲ့လူတှလေညျးကွုံရတော့ ပကာသနကိုမကျမောတဲ့ ဟနျဆောငျတတျတဲ့ ယောကျြားတှလေညျးရှိသားပဲလို့ သိလိုကျရတယျ.ကိုယျ့ဘဝမှာ ကိုယျခဈြလို့ပတျသကျခဲ့တဲ့ ယောကျြားတှဆေီက (လကျဆောငျပေးတဲ့အရာကလှဲရငျ)
ဘာမှမယူသလို ဘာမှမတောငျးဆိုခဲ့ဘူး.ကိုယျကပဲ တတျနိငျသလောကျ သူတို့ဒုက်ခရောကျနတေဲ့အခါကူညီပေးခဲ့တာ.(ယူသှားတဲ့သူတှေ မဟုတျပါဘူးလို့ ငွငျးခငျြရငျ လာငွငျးပါ.ဘာလို့ကူညီခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကွောငျးအရာနဲ့ ငှေ အမောကျကိုလူသိရှငျကွားစာရငျးခပြွပေးမယျ)တခွားလူတှကေို သှားမငွငျးနဲ့နျော.ကိုယျ့ဆီကို ကိုယျတိုငျလာငွငျး.အပွငျလူကဘာမှ သိတာမဟုတျဘူးလေ ပွောခငျြတဲ့လိုရငျးတောငျ ပြောကျသှားတယျ..မိတျကပျတှနေဲ့ပုံမွငျပွီး သိပျလှနတေယျလို့ထငျတဲ့သူတှေ သိစခေငျြတာက ကိုယျဟာ အသကျ၄၈ နှဈ သာမနျ ရှကျကွမျးရခြေို မိနျးမတယောကျထကျမပိုပါဘူး”